"Dayac" caafimaad oo ka jira Villa Soomaaliya oo qaylo-dhaan laga soo saarey
"Dayac" caafimaad oo ka jira Villa Somalia oo digniin laga soo saarey
Xukuumadda hadda jirtay ayaa ku mashquushay dhismaha xarumo kale, iyaddoo Madaxtooydda aysan Isbitaal lahayn.
MUQDISHO, Soomaaliya – Madaxtooyadda Soomaaliya lagama helayo adeeg caafimaad oo deg-deg ah, mana shaqeynayo Isbitaalkii ku yiilay, sidda uu daaha ka rogay mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka ah.
Cilmi Maxamed Nuur oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa sheegay in dayacaan uu soo ifbaxay markii intii ay socotay munaasabadii xuska 26-ka June uu isaga ku dhaawacmay xabad habow ah loona waayey gargaar.
Mudanaha ayaa kamid noqonaya tobanaan muwaadin kale oo habeenkaas rasaasta wiifto ah oo aan la aqoon meesha laga soo riday ay guriyahooda ama meelaha ay joogeen ku haleeshay lana dhigay Isbitaal.
Xildhibaanka oo ka dhawaajiyey in uu dhiig baxay markii ay xabada ku haleeshay gudaha Villa Soomaaliya ayaa tibaaxay in markii dambe loo qaaday Isbitaalka Yerdimili, halkaasoo lagula tacaalay xaaladiisa.
Xabadda oo ahayd nooca AK47 ayaa kaga dhacday gacanta midig, gaar ahaan calaan-casha. Dhakhaatiirta Isbitaalka gaarka loo leeyahay waxay ku guuleysteen in ay kasoo saaraan.
"Waxaa runtii xusid mudan in meel munaasab ah oo sidaas u weyn oo intaas oo badan ahi isugu imaanayaan munaasabad noocaas ahi lagu qabanayo in aysan jirin wax [gurmad deg-deg ah] oo qofka loola gaari karo hadii uu xanuun ku dhaco ama wax kale ku dhaco," ayuu u sheegay Dalsan Tv.
Wuxuu hadalkiisa ku daray: "Berigii hore waxaan ku ogaa in uu clinic jiri jiray, laakiin habeenkaa waxaa la xaqiijiyey in aanu shaqeynayn, waxyaaloo dawooyin ahna aysan jirin, dhakhtar deg-deg loo helayaana aysan jiri, ambalance meelahaas ka dhow oo lagu qaadana aysan jirin, arrintaasna waxay keentay in [dayac] weyn uu ka jiro xagga caafimaadka marka la eego".
"Runtii walwal weyn bay iigu keentay in xaruntaas oo goleyaasha dowladda oo madax badan isugu imaanayaan aysan lahayn xarun caafimaad oo deg-deg ah," ayuu kusoo gabagabeeyay Dr Cilmi Maxamed Nuur.
Madaxtooyadda kama jawaabin codsiyo kala duwan oo ku saabsan in ay ka warbixiyaan dhacdadaan ama dayaca la sheegay. Balse, waxay imaaneysaa xilli dowladda hadda jirta ku faanto dhismaha xarumo kale.
Villa Soomaaliya waa meesha looga arimiyo ama ay kasoo baxdo talada waddanka, waxaana ay hoy u tahay madaxda ugu sareysa ee dalka, iyaddoo xaqiiqadan haatan soo ifbaxday ay toosha ku ifineyso halis u baahan xal u helid.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu rajeeyay madaxda cusub ee...
Fahfaahinta qaraxii lagu weeraray xarunta degmada Warta Nabada
Soomaliya 14.05.2019. 11:13
Faahfaahin: Khasaaraha Qarax gaari oo ka dhacay Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 29.01.2019. 13:10
DEG DEG: Qarax xooggan oo ka dhacay Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay
Soomaliya 29.01.2019. 11:36